Pesita misy, mpizesita mahay - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny 28 aogositra no nitranga ny pesita. Vao iray volana mahery kely anie izany raha zohina. Vao nandre ny fisian’io tranga io ny teo anivon’ny minisitera mpiandraikitra ny fahasalamam-bahoaka dia nilaza ny tao fa “Lasa aloha ny saison pesteuse”.
Nanaitra ny nandre izany filazana izany. Misy tokoa izany ny vanim-potoana tahaka ny fisian’ny vanim-potoana ho an’ny rivo-doza na période cyclonique. Ity farany dia fantatry ny mpiandraikitra, fantatry ny mpanao politika fa tsy azo ikarakarana fifidianana. Fantatra io vanim-potoan’ny rivo-doza io ary dia natsangana ny Bngrc na Bureau national de gestion des risques et catastrophes. Samy mahalala io rafitra io ny tsirairay. Raha vao misy loza dia efa any ny maso. Milamina ny saina. Noho izay tokoa no nanaitra ny filazan’ny tekinisianina eo anivon’ny Minisiteran’ny Fahasalamana fa lasa aloha ny « saison pesteuse ». Izany hoe ry zareo ao izany mahalala ny fisian’io vanim-potoan’ny firongatan’ny aretina pesita io. Dia gaga ny tena. Fantatr’izy ireo izany koa nahoana no tsy niomana ry zareo ?
Ny fomba fiteny faharoa nandratra sofina dia ilay filazana hoe “efatra fotsiny no maty…”. Ekena e. Efa zatra mahita ry zareo mpiasan’ny Minisiteran’ny Fahasalamana fa mahatratra am-polony maro matetika ny matin’ny pesita ka raha efatra izany mbola lavitra ny maridrefy fanairana. Tsiahivina tokoa ohatra fa tamin’ny taona 2014 dia 70 mahery ireo matin’ny pesita teto Madagasikara.
Mitory ny toe-tsain’ireo tekinisianina tokoa ny voambolana nampiasain’izy ireo. Tsy ain’olona no manoloana azy ireo fa tarehimarika tsotra. Tsy ireo tekinisianina ihany anefa no toa izany fa na ireo mpitondra fanjakana mihitsy aza. Ndeha izay nitranga faramparany no hitarafantsika fa mampidorororo olobe ity pesita ity. Raha ny 28 aogositra no nitranga voalohany ny olona matin’ny pesita dia ny sabotsy 30 sepitambra vao nisy izany cellule de veille najoro izany. Io no voambolana nampiasain-dry zareo ary “rafitra manara-maso mba hifehezana faran’izay haingana ny valanaretina pesita no asany.”
Tena midororororo tokoa raha ny fitondrana satria iray volana aty aoriana vao nisy rafitra najoro. Tsy misy fivoriana mikasika ny ady hatao raha tsy eo ireo vahiny. Eny izy ireo tokoa no mamatsy vola an…
Midorororo tokoa ireo mpitondra. Toa tsy tazana rehefa misy fivoriana ireo heverina fa hirotsaka eny antanim-piadiana. Ohatra ny Bngrc… Ohatra ny minisitry ny miaramila na zandary na polisy… Ohatra ny mpitandro ny filaminana, Emmoreg no mahazatra antsika raha ny Emmo/nat. Tsy vonona hiady ny fanjakana. Efa « cellule de combat » no tokony napetraka io sabotsy io. Jereo fa sabotsy no najoro io « cellule de veille » io ary ny alatsinainy antoandro vao nanangana ny « cellule » ho azy ny Faritra Analamanga izay akaiky vilany fa tsy io sabotsy io na ny alahady fara-fahatarany. Midorororo hoy aho.
Inona ary no tokony ho natao ?
Raha manoratra ny tokony hatao eto akory tsy midika fa te ho minisitra ny tena. Mitatasiaka no manavanana. Mpitatasiaka maniry ho ren’ny mpitondra kosa na izany aza.
Ny toe-tsaina itafiana voalohany indrindra dia fanalavirana ny resaka politika. Raha ny ao Analamanga no itarafana azy dia ny lehiben’ny Faritra no tazana lohalaharana raha an’ny préfet ny asa filaminana sy fiarovana. Sa lasa resaka politika ny ady amin’ny pesita ? Nasiana rafitra ny ao Analamanga fa tsy ao anatiny ny Kaominin’Antananarivo renivohitra nefa dia izy no isan’ny be maty.
Mahafantatra ianareo tekinisianina eo anivon’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka fa misy ny saison pesteuse. Ok. Efa mialohan’ny fanombohan’ny saison pesteuse no tokony nanomboka ny asa ianareo. Fanentanana mikasika ny fahadiovana. Fampahatsiahivana fa hisokatra ny saison pesteuse tahaka ny vanim-potoan’ny rivo-doza ary dia apetraka ny karazana saina (ohatra : faritra mena ho an’ny kartie maloto, faritra mavo na loko hafa, faritra fotsy ho an’ny madio…).
Efa tokony io sabotsy io dia novoriana ireo mpiandraikitra fiangonana lehibe sy be olona ary dia noresena lahatra hamaky fanentanana mikasika ny fahadiovana sy fanadiovana tanana avy amin’ny fanjakana alohan’ny toriteny.
Nandritra ny fampitana mivantana ny lalao basikety dia efa tokony ho nasiana fanentanana. Saingy tsy izay no hita sy re fa mpanao gazety mitantara baolina tahaka ny mahazatra na dia nisy maty aza ny iray amin’ireo mpikatroka, toa tsy nasiana vidiny ny aina nafoy.
Efa tokony najoro ho vavolombelona ireo narary nahazo fitsaboana ka sitrana… Mora mino kokoa ny olona raha mahita izany. Maro anie ny tahaka an’i Md Tomà e. Tsy ilaina miaka-tsehatra ny endrika Hvm ary dia tena tokony halavirina mihitsy ny mamofompofona politika.
Isan’ny tena hadinon’ireo tekinisianina miasa any ambony latabatra sy mijery tahiriela na archives dia tsy mbola nisy tambazotra tahaka ny facebook tany aloha tany ka nanaparitaka vaovao araka ny itiavan’ny olona azy, tsaho sa resabe sa inona… no iantsoana azy, dia zava-misy iainana izany ary ady atrehina. Manameloka mpanao facebook no atao sy andaniana andro, ny voalavo miriaria, ny parasy mi-saute saute.
Koa, raha izaho no minisitra dia santionany ireo…
Ho nampiasaiko ny tambazotra Facebook sy ny hafa. Tsy ho navelako nanjakan’ny ahiahy ny vahoaka fa niaina ny mangarahara. Mihaino ahy ve ianareo mpitondra ? Raha tsy hihaino ahy ianareo dia mba jereo koa ny hafatr’ireo poety ao amin’ity rohy ity : http://www.lakroa.mg/item-1178_articles_culture_18-pesita-sy-zesita.html. Eny, alaviro ny zesita dia ho faty ny pesita.
Io ambony no tafavoaka tao amin’ny gazety Lakroan’i Madagasikara, taratasy, Alahady 8 okitobra 2017 ary laharana 4045, noho ny resaka toerana. Indro ny fanampiny ho antsika mamaky eto amin’ny interinety.
Nambarantsika teo fa mampidorororo ny pesita. Nasehontsika ny santionany. Fa mampivaralila ihany koa ity pesita ity. Ndao anie araho ireto santionany ireto e.
Ny alatsinainy maraina dia nitety radio i Paul Rabary, Minisitry ny fanabeazam-pirenena. Nambarany fa hatomboka ny fanakatonana ny sekoly ary mihodina izany fanakatonana izany. Izany hoe hisy fanadiovana ny sekoly ka ireo namendrahana fanafody dia hikatona mandritra ny telo andro. Ok. Mazava voaray ny baiko. Ny hariva dia indro ny vaovao hafa milatsaka fa hakatona daholo ny sekoly rehetra amin’ny Cisco enina (Antananarivo renivohitra, Atsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Toamasina I sy Toamasina II). Fanina ihany ny mpanara-baovao manoloana izany.
Mampivaralila ny fihetsik’ireo mpitondra. Jereo anie ny sary atolotra antsika eto e. Nijery ny teny amin’ny hopitalibe ao Toamasina ny minisitry ny fahasalamana. Niaro tena hatrany antampon-doha ka hatreny am-paladia izy sy ireo niara-dia taminy. Fa ahoana e ? Ary mba ahoana izany ireo miasa ao amin’ny hopitaly isan’andro ? Mba mahazo ireny fiarovana ireny va re ry zareo sa… ? Mpizesita ho’aho.
Jereo ny fanaovana fitantana mizana tsindriana ila. Misy ireo hetsika famoriam-bahoaka asaina hatsahatra fa ny hafa odian-tsy hita. Ohatra tanterahana ny hetsika salon de l’auto sa ve saranga ambony no mandeha mamonjy any ka tsy atahorana handrehoka na hikohoka ireo mpitsidika any ? Indrisy… Maty aho Madajazzcar… toa mba saranga mitovy ihany ny mamonjy ireny sy ny salon de l’auto an !
Farany, nahoana no rarahana fanafody ny sekoly kanefa ny manodidina tsy kitihana moa ve tsy mitsoa-ponenana vetivety ny parasy dia miverina indray ?
Santionany ireo re… Antsika ny fahoriana tongo-bakivaky ndao hifanome hery (tsy filoham-pirenena akory) hifanome zotom-po sy fandrisihana. Courage jiaby.